Diyaaradii siday Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo soo caga dhigatay Muqdisho
Waxaa goor dhowayd oo galabta ah soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho diyaarad siday Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo maanta soo gaaray xarunta gobolka Bakool ee Xudur.
Sheekh Mukhtaar oo ay la socdaan wasiirka gaashaandhiga xukuumada Soomaaliya iyo taliye kuxigeenka hay’ada sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Muqdisho kadib wadahadalo saacado qaatay oo ka dhacay magaalada Xudur.
Imaatinka Sheekh Mukhtaar ee magaalada Muqdisho ayaa ka dambeysay kadib markii ay dhowaan weerareen maleeshiyooyinka Alshabaab saldhiga Sheekh Mukhtaar uu ku leeyahay deegaanada howdka ah ee gobolka Bakool ayada oo ay ciidamadiisuna iska difaaceen weeraradii lagusoo qaaday.
Sheekh Mukhtaar ayaa wax ka badan afar sano gooni uga taagnaa Alshabaab kadib markii ay is qilaafeen amiirkii Xarakada Alshabaab Sheekh Mukhtaar Abuu Zubeyr Axmed Cabdi Godane isaga oo wixii xiligaas ka dambeeyay ku sugnaa deegaanada miyiga ah ee gobolka Bakool gaar ahaan tuulooyinka u dhow deegaanka Abal.
Madaxweynaha Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxda sare ee dowlada federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay la kulmaan sheekh Mukhtaar Roobow ayada oo ay boqolaal ciidamadiisa ahna weli ku suganyihiin deegaanadii lagu dagaalamay ee gobolka Bakool.
Sheekh Mukhtaar Roobow oo horay ugasoo noqday Alshabaab amiir kuxigeenka iyo afhayeenka Xarakada ayaa waxa uu ahaa maskaxdii ka dambeysay inay dadka reer Koonfur galbeed iyo weliba Jubbooyinka la shaqeeyaan Alshabaab isaga oo waqti dheer geliyay inay Alshabaab ka mid noqdaan balse markii dambe ayaa ay isku qabteen amiirkii Alshabaab qaabka loola macaamilayo dadka iyo weliba waxyaabo kale oo aaan la ogeyn balse ayaga un u gaar ahaa.